China Okomoko Mbupu Mbupu House rụpụta na Factory | Yi'an
Feetlọ 40 dị okomoko ebugharị na ime ụlọ ịwụ ime ụlọ ime ụlọ na china.
Ndị mmadụ abụọ, Ndụ Ọhụrụ, dị ka ejiji, ma ọ bụghị ụdị ejiji, na-enweghị usoro ọdịnala, mana mgbe niile dị iche, ọ bụghị na nkọwa nke Ndụ, kama yana ụzọ ndụ iji gosipụta onwe ha. Bilie n'ụtụtụ ma mee onwe gị njikere n'ihu N'ihe dị ka enyo, laghachi na mgbede, dobe uwe ahụ na ihe ịchọ mma niile, n'ime obere ime ụlọ ịwụ ahụ mara mma, nwee ọ aụ aụ ịsa ahụ. Oge ụfọdụ anyị nwere ike ịgụnye nke ọma, mana enweghị ike imebi, ịhụnanya bụ, ụlọ dịkwa, dịka nke a karịa 40 square mita nke siri na mara ohere.
Site na echiche oru ngo, imepụta ihe, imepụta, ntinye, na anyị niile were ndị ahịa dịka etiti, ụlọ ọrụ ahụ na-enye ngwaahịa na ọrụ gụnyere ụlọ ndị a rụchara arụ, machie ụlọ ọrụ, ụlọ saịtị, ụlọ mkpanaka, mgbidi ọrụ, igbe ezipụ, nchara nchara ụlọ, ígwè Ọdịdị factory ụlọ, na-eme, caigang trailer, ìhè ígwè trailer, igbe, nwa oge ụgbọala na-adọkpụ, Nchikota ụlọ, caigang Sanwichi osisi, wdg, Welcome ịkpọtụrụ na kpakorita.
Uru nke Container Housing:
1. transportationgbọ njem na-adaba adaba, ọkachasị maka nkeji nke na-agbanwe saịtị saịtị;
2. ike na inogide, niile mejupụtara ígwè, na a siri ike mgbochi seismic, mgbochi deformation ikike;
3. arụmọrụ akara ahụ dị mma, usoro nrụpụta siri ike na-eme ka ụdị ụlọ ọrụ a nwee ezigbo mgbochi mmiri;
4. ụlọ ọrụ na-adabere na chassis nchara ọkọlọtọ, nwere ike inweta site na ọtụtụ nchikota nke ohere. Dị ka ụlọ nzukọ, ebe obibi, kichin, ụlọ mposi na ihe ndị ọzọ. Widthkpụrụ nke ọkọlọtọ bụ 2.4 mita, elu 2.2 mita, ogologo nke 4 mita ruo mita 12.
Mgbasaozi na ntinye dị mma, arụmọrụ dị mma, nke kwụsiri ike ma sie ike, arụmọrụ na-adịghị mma, mmiri na-egbochi ya, mgbochi ọkụ na mgbochi corrosion, ọkụ dị arọ. Houselọ ahụ bụ akụkụ dị mkpa, yana etiti, mgbidi bụ efere igwe, nwere ike ịbụ ihe mkpuchi osisi n'ozuzu Mbugharị, ọrụ ndụ nwere ike iru ihe karịrị afọ 20.
Nke gara aga: Ogige kerslọ Ọrụ Ndị Ọrụ Ebe Obibi Na-ewu Sitelọ
Osote: prefabricated ewepụghị mkpọ aku akpa ụlọ ibi na kichin
mobile prefab ígwè akpa ụlọ maka hotel o ...